यात्रा मा Covid-19 ट्रेन यात्रा उद्योग Advise | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > यात्रा मा Covid-19 ट्रेन यात्रा उद्योग Advise
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 11/04/2021)
Covid-19. हामी सबै कुरा गर्न सक्षम देखिन्छौं, र राम्रो कारण लागि. यो भाइरस दुनिया gripped छ र पूर्ण हामीले दैनिक जीवन र पाठ्यक्रम ट्रेन यात्रा लाग्छ बाटो परिवर्तन. रेल यात्रा एक छ यातायात मोड केवल छुट्टी खुशी को लागि धेरै प्रयोग, तर काम हिड्नुभन्दा लागि साथै.
त्यसैले, यात्रा मा रेल यात्रा उद्योग Advise के हो?
गरेको रेल उद्योग तपाईं सुरक्षित राख्न गरिरहेको छ के छलफल गरौं. ट्रेन स्टेशनहरू बहुमतले रेल र स्टेशनहरूको लागि सफाई प्रोटोकल तीव्र गर्दैछ. सफाई intensifying बाहेक, रेल र स्टेशन मा आवृत्ति पनि बढेको छ. सफाई एक घण्टाको आधारमा हुन्छ र ह्यान्ड्राइल्सलाई खाली गर्न कीटाणुनाशकको ​​प्रयोग समावेश गर्दछ, doorknobs, ह्यान्डलहरू, र शौचालयहरू. थप जीवाणुरोधी उत्पादनहरु, sanitizers र पोंछे सहित, स्टेशन मा प्रदान भइरहेका छन्, रेलमा, र कर्मचारी काम क्षेत्रमा.
यात्रा सुझाव मा रेल यात्रा उद्योग Advise 1: अनलाइन भुक्तानी
हामी जाँदै सिफारिस गर्छौँ 100% यदि तपाईं सम्पर्क. यदि तपाईं किनेको छैन आफ्नो रेल टिकट अनलाइन जो कारण लागि, सबै भुक्तानी अगाडि जाँदै यदि सम्भव छ भने सम्पर्क हुनुपर्छ. किन? राम्रो, त्यहाँ केही मिश्रित सन्देश हो. यो इङ्गल्याण्ड को बैंक भन्छ: "कुनै पनि अन्य सतह जस्तै कि मान्छे को ठूलो संख्या संग सम्पर्कमा आउन, टिप्पणीहरू जीवाणुहरु वा भाइरस ले. तथापि, एक बहुलक टिप्पणी ह्यान्डल गर्ने खडा जोखिम कुनै पनि अन्य सामान्य छोएर भन्दा कुनै ठूलो यस्तो Handrails रूपमा सतहहरु छ, doorknobs, वा क्रेडिट कार्डहरू। " यो महिनाको सुरुमा एक अखबार रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन दावी (कसले) थियो भने बैंकनोट्स हुन सक्छ को coronavirus फैलाउने, यसैले मान्छे सट्टा सम्पर्क भुक्तानी प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुपर्छ. तर यो त रिपोर्ट थियो जो यसलाई नगद coronavirus दिइरहनुभएको थियो भने थियो अस्वीकार, र "गलत अर्थ लगाइन्छ" यो थियो कि - त्यसैले आंकडा जाने.
तथापि, गरौं दुई र दुई सँगै राख्न, हामी हुनेछ? सबैभन्दा टिप्पणीहरू र सिक्का पहिले मान्छे को ठूलो संख्या द्वारा ह्यान्डल हुनेछ गरिएको , यदि तपाईं चिन्तित छन् त्यसैले, एक सम्पर्क कार्ड जहाँ सम्भव संग तिर्ने शायद जाने बाटो छ.
रेल बाट मिलन रोम
ट्रेनबाट पिसा रोम
रेल द्वारा नेपल्स रोम
सुझाव 2: सामाजिक Distancing!
सामाजिक Distancing कुनै पनि परिस्थितिमा अर्थ TOUCHY. तर, के crammed रेल बारेमा, ट्यूब, र trams?
नियमित प्रयोग भएको छ जो ट्रेन यात्रा जो कोहीले यसलाई केही सेमी अर्को यात्री टाढा छ रहन गाह्रो हुन सक्छ भनेर थाहा हुनेछ, सिफारिस 1 मेगा कहिल्यै आपत्ति. मा मिलान, यात्रु खाली सीट विपरीत बस्न सल्लाह गरिएको छ, थप व्यस्त शहर मा जो यात्रु को कुरा सामान्यतया केवल सपना सक्नुहुन्छ.
सबैभन्दा व्यस्त ट्रेन यात्रा शहरहरू लन्डन हो. लन्डन लागि परिवहन एक "उन्नत सफाई शासन" राजधानी गरेको मा स्वच्छता स्तर सुधार गर्न अनावरण सार्वजनिक यातायात, तर सामाजिक distancing लागू गर्न केही. यो तपाईं सम्म छ. तल रेखा भनेको तपाईंले अन्य व्यक्तिलाई छुनुबाट जोगिन प्रयास गर्नु आवश्यक छ. यदि सम्भव छ भने कम व्यस्त समयमा यात्रा, तपाईं हृदयस्पर्शी रेल जोगिन सक्छौं भने पन्जा लगाउने, सीट, आदि. तपाईं आफ्नो आफ्नै निस्संक्रामक बोक्न. सबै समय मा तपाईं को लागि प्रदान गर्न ट्रेन स्टेशन मा भरोसा छैन. माफ गर्नुहोस् भन्दा राम्रो सुरक्षित!
एम्स्टर्डम को रेल बाट पेरिस
ट्रेनबाट लन्डन पेरिस
ट्रेनहरु द्वारा रोटरडम पेरिस गर्न
सुझाव 3: के छैन Refillable कप प्रयोग गर्नुहोस्!
को यात्रा मा रेल यात्रा उद्योग Advise को डु गरेको मा गाइड समावेश र के छैन र आफ्नो मनपर्ने cuppa. बानी मा प्राप्त गर्दा बाहिर र बारेमा एक पर्यावरण-सजग कदम रूपमा प्रोत्साहन गरिएको छ जब refillable कप पूरा र प्रयोग, हामी यो अब लागू भयभीत हुनुहुन्छ.
धेरै ठूलो कफी चेन को coronavirus फैलन प्रतिक्रिया एक पुनर्विचार भइरहेको, Starbucks अस्थायी रूपमा reusable कप प्रयोग प्रतिबन्ध संग - सामान्यतया प्लास्टिक बनेको, गिलास, वा बाँस सामग्री - दुबै ग्राहकहरु र स्टाफ को सुरक्षा को लागी. सामान्यतया, तपाईं आफ्नै कप ल्याउन को लागी छुट पाउनुहुन्छ, तर तपाईं अब एउटै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सक्छ! तपाईं सुरक्षा खातिर भनेर सानो छुट जरिनामा छ जाँदै हुनुहुन्छ.
ब्रसेल्सदेखि एम्स्टर्डमको ट्रेनहरू
बर्लिनदेखि एम्स्टर्डम ट्रेनहरू द्वारा
पेरिस देखि एम्स्टर्डम रेल द्वारा
सुझाव 4: टच छैन!
यदि रेल लिएर मतलब संक्रमण बढी जोखिम धेरै मानिसहरू सोध्दै हुनुहुन्छ. यदि तपाईं एक रेल र भित्र बसेर छन् भनेर छोटो जवाफ छ 1-2 खोकी गर्ने एक संक्रमित व्यक्ति को मीटर, संक्रमण जोखिममा तपाईं.
तर के हामी सोच्न दर्शाउन बढी सम्भावना जोखिम भाइरस लागि lingering छ थप उचित छ 48-72 एक कठिन सतह मा घन्टा, जस्तै ह्यान्ड्रेल. यो सिर्फ गाडिहरु हुनत लागू हुँदैन. यसलाई कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँ हो.
तपाईं रेल स्पर्श छ भने, बटन, टिकट, र यति मा, बस एक राम्रो हात वा यसलाई गर्न प्रयास, आफ्नो कुहिनो! अन्य "सफा" हातमा फोन राख्न र आफ्नो गन्तव्य मा बित्तिकै तपाईं दुवै धुन.
न्युरेनबर्ग प्राग बाट ट्रेनहरू
ट्रेनबाट म्यूनिख प्राग
बर्लिनदेखि प्रागहरू ट्रेनहरू
ट्रेनबाट भियना प्राग
सुझाव 5: यात्रा रेल!
तपाईं यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो रेल द्वारा होस्. हामी झन् देखिरहनुभएको हवाई यात्रा मा कुनै फिर्ती, जबकि रेल यात्रा थप लचिलो छ. लागू सामान्य नियम र सर्तहरू को एयरलाइन्स प्रतिक्रियाहरू धेरै हुन थाल्छ. "हाल एयरलाइन्स लागि सल्लाह गर्न कुनै परिवर्तन छ, हाम्रो उडानहरू सामान्य र मानक नियम र टिकट मा अवस्था रूपमा सञ्चालन गर्दै यति लागू गर्न जारी,"EasyJet भन्छन्.
केही प्रतिद्वन्द्वी एयरलाइन्स थप accommodating भइरहेका छन्. ब्रिटिश एयरवेज गर्न उडानहरू मा लचीलापन को एक डिग्री भेटी छ उत्तरी इटाली, यसको बहिनी विमान Aer Lingus एक राम्रो प्रतिज्ञा साथ रहेको छ, जबकि: "Aerlingus.com र आफ्नो आगामी उडानहरू को मिति वा गन्तव्यहरू परिवर्तन गर्न इच्छा मा बुकिङ गर्ने गरेका मेहमान त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ।"
ट्रेनहरू द्वारा फ्रान्कफर्ट बर्लिन
ट्रेनबाट बर्लिनमा लाइपजीग
ट्रेन द्वारा हर्नोभर बर्लिन
सुझाव 6: तपाईंको आफ्नो Snacks प्याक!
यदि तपाईं रेल द्वारा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नै नाश्ता प्याक. Many trains have अस्थायी रूपमा उनीहरूको प्रथम श्रेणी लाउन्जेहरू बन्द भए र जहाजमा केटरि removed हटाइयो. त्यसैले, समय आफ्नो lunchboxes संग रचनात्मक प्राप्त गर्न! तपाईं बोर्ड अघि स्टेशन खाना रिटेलरहरूबाट तपाईंको आफ्नै जलपान वा खरिद लिन. यी उपाय पाठ्यक्रम हो, रक्षा र COVID-19 भाइरस फैलाउने कम गर्न डिजाइन!
ट्रेन द्वारा मिलान भेनिस
ट्रेनबाट बोलोना भेनिस
ट्रेन बाट रोम भेनिस
हामीलाई थाहा छ यो डरलाग्दो समय छ. तर, रेल वा अन्य हालतमा यात्रा हामी स्वास्थ्य र सुरक्षा गर्न आफ्नो दृष्टिकोण मा शान्त र तार्किक रहन प्रोत्साहन. मा एक ट्रेन सेव हामी हाम्रा सबै ग्राहकहरु सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छन् र कर्मचारी सुरक्षित राखिन्छ र सबै नवीनतम सुरक्षा प्रक्रिया र विकासक्रम मिति सम्म हो.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “Covid-19: यात्रा मा कसरी ट्रेन यात्रा उद्योग Advise?” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcovid19-train-travel-industry-advise%2F%0A%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Coronavirustravel covid19 सुरक्षा रेल यात्रा